အလုပ်ဝင်ပြီး ပါမန့် နန့် ဝန်ထမ်းဖြစ်ခါမှ လစာလျှော့ချခံရခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Business & Economics » အလုပ်ဝင်ပြီး ပါမန့် နန့် ဝန်ထမ်းဖြစ်ခါမှ လစာလျှော့ချခံရခြင်း
အလုပ်ဝင်ပြီး ပါမန့် နန့် ဝန်ထမ်းဖြစ်ခါမှ လစာလျှော့ချခံရခြင်း
Posted by moonpoem on Feb 5, 2013 in Business & Economics, Creative Writing, Jobs & Careers, My Dear Diary | 27 comments
ကတိမတည်သော ဂျပန်များ လစာ ထက်ဝက်လျှော့ချပစ်ခြင်း
ကျွန်မ တိုးဂိုက်အဖြစ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုခဲ့တာ ၄နှစ်ပြည့်ပြီးနောက်ပိုင်း တစ်ရက်မှာတော့ စကားပြန်အဖြစ်လုပ်ပေးဖို့ကျွန်မကုမဏီက ပြောလာပါတယ်။ စကားပြန်ကတော့ တိုးဂိုက်ထက် နည်းနည်းလေးတော့ ပိုခက်တယ်လို့ ကျွန်မထင်တယ်။ တိုးဂိုက်ကတော့ လုပ်သက်ရှိသွားရင်
အားလုံးက အေးအေးဆေးဆေးဖြစ်သွားပေမယ့် စကားပြန်ကကျတော့ သူ့ အပိုင်းနဲ့ သူ မတူညီတာလေးတွေ ရှိပါတယ်။ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဆိုလည်း ရင်းနှီးမြုပ်နှံတာနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ စကားစုတွေ၊ ဘဏ်လုပ်ငန်း၊ ဆောက်လုပ်ရေး စသဖြင့် အမျိုးမျိုးသော ပညာရပ်တွေက ခက်ခဲနက်နဲမှုတွေ ရှိတာကြောင့် တော်တော်လေး
ကျွန်မအတွက် ပထမဆုံးကျလာတဲ့ စကားပြန်တာဝန်က ဆောက်လုပ်ရေးနဲ့ ပတ်သတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆောက်လုပ်ရေးနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ အပိုင်းတွေကို ပြန်လေ့လာပြီး စကားပြန်လိုက်ခဲ့ပါတယ်။ ပထမဆုံး ပွဲဦးထွက်မှာ စကားပြန်အဆင်ပြေပြီး နောက်ပိုင်း ကျွန်မကို ကျွန်မကုမဏီက ဆောက်လုပ်ရေးနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့
စကားပြန်လိုက်ဖို့ ဆိုရင် ကျွန်မကို ထည့်ပေးပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပဲ ကျွန်မ အခုလုပ်နေတဲ့ ဆောက်လုပ်ရေးကုမဏီမှာ လုပ်ဖြစ်ဖို့ အကြောင်းဖန်လာပါတယ်။
သူတို့ တွေက မြန်မာနိုင်ငံကို တစ်လတစ်ခါ ပုံမှန်လာပြီး လာတိုင်းလည်း ကျွန်မကပဲ စကားပြန်အဖြစ်
လိုက်ပေးပါတယ်။ နောက်ဆုံး ပြီးခဲ့တဲ့ အောက်တိုဘာမှာ သူတို့ တွေ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဆောက်လုပ်ရေးကုမဏီ
ဖွင့်ဖို့ ဖြစ်လာတော့ ရုံးအတွက် ၀န်ထမ်းလိုလာပါတယ်။ကျွန်မကတော့ ၀န်ထမ်းလုပ်ရမှာ ၀ါသနာ ပါသူမဟုတ်တော့ သူတို့ ဘက်က ကမ်းလှမ်းတာကို ပထမအကြိမ်မှာတော့ ကျွန်မငြင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဒုတိယတစ်ခေါက်မှာတော့ တစ်လကို ကျွန်မအတွက် အဆင်ပြေတဲ့ လစာနဲ့ ခန့်မယ်။ ခန့် ပြီးရင်လည်း ဘန်ကောက်၊စင်ကာပူ၊ဂျပန် စတာတွေကို ပညာသင် သွားနေရမယ်လို့ ဆိုလာပါတယ်။စနေ၊တနင်္ဂနွေ
ရုံးပိတ်ရက်တွေမှာလည်း ကျွန်မ၀ါသနာပါတဲ့ ဂိုက်အလုပ်လုပ်ခွင့်ပေးမယ်လို့ ဆိုလာပါတယ်။ဒီတော့
အရင်ကုမဏီနဲ့ လည်း မိတ်မပျက်တဲ့အတွက် ကျွန်မထက် ကံကောင်းတဲ့သူရှိပါဦးမလား။
ကျွန်မအတွက် လစာထက် ပညာသင်သွားရမယ်ဆိုတာ ပိုပြီး မက်မောစရာကောင်းပါတယ်။ ပိုက်ဆံစုလည်း လေယာဉ်စရိတ်တောင်မရှိတဲ့သူဆိုတော့ ဒီလို နိုင်ငံရပ်ခြားကို သွားပြီး ကုမဏီအစီအစဉ်နဲ့ သွားရမယ်ဆိုတာ
သိပ်ကို ကောင်းပါတယ်။ဒါနဲ့ ပဲ သူတို့ ဆောက်လုပ်ရေးကုမဏီမှာ လုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ် ဆိုပါတော့။ လုပ်ဖြစ်ပေမယ့် ပါမန့်နန့် ဝန်ထမ်းအနေနဲ့ တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ မှာ ကုမဏီလိုင်စင် မရသေးတော့ ၀န်ထမ်း သဘောမဟုတ်ဘဲ ကိုယ်ရေးအရာရှိတစ်ယောက်အနေနဲ့ တစ်လပြီး တစ်လ ဆက်ပြီး ခန့် တဲ့သဘောမျိုးနဲ့ ပဲ ထားတာပါ။ ဒါပေမယ့် သူတို့ က ကုမဏီလိုင်စင်ရရင် ဒီလစာ အတိုင်း ပါမန့် နန့် ဝန်ထမ်းခန့် မယ်လို့ လည်း ကတိပြုထားပါတယ်။
သူတို့ ပြောသလိုပါပဲ ၀င်ပြီး တစ်လနေတော့ ဘန်ကောက်ရုံးခွဲကို ပညာသင်သွားရပါတယ်။ ကျွန်မကတော့
သူတော်ကောင်းတွေနဲ့ တွေ့ တာပဲလို့ ယူဆပြီး အပျော်ကြီးပျော်နေတာပေါ့။ ကုမဏီလိုင်စင်ရလာတဲ့ ဒီဇင်ဘာလမှာတော့ နောက်ထပ် ၀န်ထမ်း၂ယောက်ကို အသစ်ခန့် ပါတယ်။၀န်ထမ်းအသစ်ခန့် ပြီး ကျွန်မကို လည်း ဒီဖေဖော်ဝါရီမှာ ပါမန့် နန့် အဖြစ် ခန့် တော့မယ်လို့ ဆိုလာပါတယ်။ကျန်းမာရေးအာမခံ၊ အသက်အာမခံ
စတဲ့ အာမခံတွေထားပေးမယ်ဆိုတော့ ကျွန်မအတွက် ဒါဟာ အဆင့်အတန်းမြင့် နိုင်ငံခြားကုမဏီမှာ လုပ်ရတဲ့
အကျိုးကျေးဇူးတွေပါလားလို့ တွေးမိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အာမခံထားပေးမယ်ဆိုတဲ့ စကားကို ပြောအပြီး နင့်ကို
မြန်မာနိုင်ငံက၀န်ထမ်းတွေပေးတဲ့ စကေးအတိုင်း ပဲ ပေးတော့မယ်။ အခုပေးထားတဲ့ စကေးအတိုင်းမဟုတ်တော့ဘူးလို့ ဆိုလာပါတယ်။
ကျွန်မတစ်သက်မှာ ကုမဏီဖြစ်လာကတည်း က ခန့် ထားတဲ့ ၀န်ထမ်းကို လစာတိုးပေးတာပဲ ကြားဘူးပါတယ်။
သူတို့ ကျမှ လစာလျှော့ချတာတွေ ဖြစ်လာတယ်။ကျွန်မကတော့ ဒါသူတို့ သက်သက်လူလည်ကျတာလို့ ပဲ
ထင်ပါတယ်။ သူတို့ တွေ ၀န်ထမ်း အရမ်းလိုအပ်နေချိန်မှာ ကျွန်မကို ကျွန်မတောင်းသလောက်ဈေးပေးပြီး
ခန့် ခဲ့တာပါ။ကျွန်မကလည်း မတန်မရာ လစာမတောင်းပါဘူး သူတို့ တွေ တစ်လကို ၁၄ရက်လာပြီး စကားပြန်ငှားရင်တောင် ကျွန်မအခုရတဲ့ လစာထက် ပိုပြီး ပေးရပါတယ်။ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အဆင်ပြေလို့ ဒီလစာနဲ့ 
ခန့် ပြီးမှ အခုလို လုပ်ပစ်တာက ကျွန်မအတွက် မနှစ်မြို့ ဖွယ် ရာ ကောင်းလှပါတယ်။
သူတို့ တွေက မြန်မာနိုင်ငံကိုလာတယ် မြန်မာဝန်ထမ်းတွေကို မြန်မာပြည်က ပေါက်ဈေးအတိုင်းပေးတယ်။
ဒါပေမယ့် သူတို့ ရဲ့ ဆောက်လုပ်ရေးကို ကျွန်မတို့ မြန်မာတွေက အပ်ရင်ကတော့ ယူတဲ့ဈေးက နိုင်ငံခြားဈေးအတိုင်း ယူပါတယ်။ဥပမာ အိမ်ခန်းအလှဆင်တာကို မြန်မာလူမျိုးကို အပ်ရင် တစ်ခန်းကို သိန်း၆၀ဆို ကောင်းကောင်းရပါတယ်။ဒါပေမယ့် သူတို့ ကို အပ်ရင်တော့ သိန်း၄၀၀ကို တစ်ကျပ်မှ
မလျော့ပါ။ အစိုးရကို အခွန်ဆောင်ရတာတွေ သူတို့ တွေမြန်မာပြည်လာတဲ့စရိတ်တွေ ရှိတာမှန်ပေမယ့်
သူတို့ လေယာဉ်အသွားတစ်ကြောင်းလောက်တောင် လခမပေးရတဲ့ မြန်မာပြည်က ၀န်ထမ်းတွေကို
ထပ်ပြီး လျှော့ချတာဟာ အင်မတန် စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ရာ ကောင်းတဲ့ အပြုအမူပါ။ကတိကို မတည်တာလည်း မကောင်းပါဘူး။
အခုလိုမျိုးပဲ လစာ တစ်သိန်းကျော်ပဲ ပေးမယ်ဆိုရင် အစကတည်းက ကျွန်မလည်း လုပ်မှာမဟုတ်သလို တခြားဝန်ထမ်းတွေလည်း စဉ်းစားမှာတောင် မဟုတ်ပါ။ အခုဟာက ခန့် တုန်းက ၀န်ထမ်းတွေနဲ့ ညှိနှိုင်းပြီး
ပေးခဲ့ပြီးမှ အခုလို မျိုး လုပ်တာဟာ လူကြီးလူကောင်း နိုင်ငံကြီးသား မပီသတဲ့ လုပ်ရပ်တစ်ခုပါ။
(ခန့် တုန်းက လစာထက် ထက်ဝက်လျှော့ချပစ်မှာပါ)
အခုကျွန်မထွက်စာ တင်ထားပါတယ်။ အလုပ်သဘောအရ တစ်လကြိုတင်ရင်ရပါပြီ။ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈ရက်နေ့ က ကျွန်မ နောက်ဆုံး အလုပ်ဆင်းရမယ့် နေ့ပေါ့။ထွက်စာတင်တဲ့ နေ့ က သူ က ကျွန်မကို ပြောပါတယ်။ မင်းကိုငါ
မတ်လ၃၁ရက်မှ ထွက်ခွင့်ပြုမယ် ငါ့အလုပ်တွေ အဆင်မပြေသေးလို့ မင်းနေပေးပါ။ ဧပြီကတော့ မင်းသဘောပါ
သင်္ကြန်ဆိုတာ ပိတ်ရက်များတော့ ငါတို့ အတွက်လည်း ခန့် ဖို့ အဆင်မပြေဘူးတဲ့။
ခန့် တုန်းက ခန့် ခဲ့ပြီး ထွက်မယ့်အချိန်မှာတောင် ကိုယ်ကျိုးတစ်ခုပဲ ကြည့်တဲ့ သူတို့ ကို ကျွန်မ မုန်းပါတယ်။
၃လပိုင်းမှာ ဂိုက်လုပ်နိုင်ပါမှ ဧပြီမှာ ကျွန်မအတွက် အဆင်ပြေမှာပေါ့။ ဧပြီ၁ရက်နေ့ ဆို တိုးလည်းနည်းပြီ။သင်္ကြန်မှာ ၀င်ငွေမရှိတော့ရင် ဘယ်သူကတင်ကျွေးမှာလဲ။ ကျွန်မမိသားစုကိုရော ဘယ်လိုပြောပြရပါ့မလဲ။ သင်္ကြန်……ပိတ်ရက်……၀င်ငွေမရှိ………….အလုပ်………။
အဲလိုဆို မတ်လအတွက် လစာကို လိုချင်တဲ့ဈေးတောင်းလေ… အကြောင်းစုံကို ပြောပြပေါ့။ ငါ့မှာ ဧပြီတလလုံး ထိုင်နေရမှာ ဝင်ငွေရှိချင်မှရှိမယ်၊ မတ်လအထိ နင်တို့ဆီလုပ်စေချင်ရင် ပိုပေးပါ ဒါမှမဟုတ် တာ့တာလို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပြရင် ရနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်တောင်းတဲ့ လခက အလွန်အကျွံမဟုတ်ဘဲ အဲသလို နိုင်ထက်စီးနင်း လုပ်တာမျိုးဆိုရင် ကုမ္မဏီနာမည်ကိုပါ ဖွင့်ချပစ်လိုက်….။
ဦးကြောင်ကြီး ပြောသလို ကျွန်မလည်း လုပ်ဖို့ ရယ်ရွယ်ထားပါတယ်။ ကိုယ့်တိုင်းပြည်လာပြီး လူပါးဝတာတော့ သည်းမခံပါဘူး။
ထွက်စာကို တစ်လကြိုတင် ရမှာမှန်ရင်
နိုင်ငံခြားသားက နှိမ်လို့ရရင်ပိုနှိမ်ပါတယ်… ငါတို့လုပ်သမျှခံရှာတယ်ဆိုပြီး မြန်မာတွေလိုမသနားပဲ အရည်အချင်းမရှိလို့ ငါလုပ်သမျှခံတာဆိုပြီး အထင်သေးပါတယ်… အားမနာတမ်း ကိုယ်လိုချင်တာကို အရေးဆိုပါ.. ပြီးရင် May I know why? လို့ သူတို့ ကတိပျက်တာကိုထောက်ပြပါ..
ဒီကိတ်စ ကို သူရို့ ဘက်က စပြောတဲ့ စကေးအတိုင်း ပေးအောင် မရမက (ကခိုင်းခြင်းမဟုတ်) တောင်းရမယ်ကွဲ့ ။
အပေါ်မှာ ဥကြောင်ကြီး ပြောသလိုပဲ … မပေးရင် နာမည်နဲ့ သူ့ ရုံးလိပ်စာ စုံစီနဖာ ဖွင့်ချပြလိုက်
မြန်မာနိုင်ငံမှာက ရှေးကတဲက ခေါင်းပုံဖြတ်နေကြတဲ့ စနစ်ကို သူရို့ တွေ လေ့လာပြီး ၊ အဲ့လမ်းလိုက်တာလား မသိ ။
ကန်ထရိုက် တစ်ယောက်က အလုပ်ရှင်စီကနေ အလုပ်သမားစရိတ် တစ်ရက်ကို ၅၀၀၀တောင်းတယ်
သူ့ အလုပ်သမားကိုတော့ တစ်ရက်ကို ၄၅၀၀ပဲပေးတယ်
နဲနဲ ပိုရှင်းအောင် မေးပါရစေ moonpoem ရေ ..
ကုမ္မဏီက ဂျပန် ကိုယ်တိုင်ဘဲလား ..မြန်မာ ရှယ်ယာပါသေးသလားဆိုတာ လေး …. ရေးထားသလောက်ဆိုရင်တော့ ဂျပန် ကိုယ်တိုင်ကလို့တော့ သဘောပေါက်ပေမဲ့ သေချာအောင် သိချင်လို့ပါ …
ရှယ်ယာမှာ ဂျပန်တွေချည်းပါပဲ မြန်မာမပါပါဘူး။
ဂျပန်တွေ အချိန်တိကျတာ စနစ်ကျတာ အလုပ်ကြိုးစားတာ ကတော့
အားလုံးက လက်ခံရတဲ့ အချက်တွေပါပဲ
မြန်မာမှာ ရှိတဲ့ ဂျပန်တွေမှာ တခြားထက် ထူးတာကျ လစာ များများပေးဘို့ တွန့်တာပါ
၀န်ထမ်းတစ်ယောက် ရာထူးတိုး လစာတိုးဘို့က တော်တော်ခက်ပါတယ်
ကိုယ့်ဘက်က အရည်အချင်း ပြည့်အောင်သာ လုပ်ထားပါ
သူတို့ထက် ပိုကောင်းတဲ့ နေရာ တွေ့ပါလိမ့်မယ်
အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းတွေ များလာရင်
အရည်အချင်း ရှိတဲ့သူ ရှားလာပါလိမ့်မယ်
အဲဒီကျမှ ကိုယ့် အရည်အချင်းနဲ့ ထိုက်တန်တဲ့ လစာ ထိုင်တောင်းရုံပါပဲ
အခုချိန်ကတော့ သူတို့ဘက်က အသားလို ဖြစ်နေတာပေါ့
ပြောပုံ အရ ဂျပန် ဆောက်လုပ်ရေး Company ဆိုတော့ …..
သူတို့ပဲ ဒီအကျင့်ရှိတာပဲ။ Company ကတော့ အကြီးကြီး။ ဂျပန်နည်းပြီး ဖောရိန်နာ များများခန့်ပြီး နိုင်စားတဲ့ Company ဟာ။
ကျန်တဲ့ ဂျပန် Company တွေကတော့ အဲလို လုပ်ခဲတယ်။
ပိုအမ်လေးအဲ့လို ချစ်တီးကျတဲ့ ကမ်ပဏီတွေမှာမလုပ်နဲ့ဒေါ့
အူးစည် ပိုက်ချံတွေစုပြီး ပြန်လာရင် ဖွင့်မယ်…
L.Y.P.S (လယ်ယာပြန်စား ၀ါးဓနိဆောက်လုပ်ရေး) ကမ်ပဏီမှာ
ဂျပန်ကုန်မနီကိုမှ သွားပြီးအလုပ်လုပ်တာဂို ဖြစ်မှာပေါ့
ဂျပန်ဆိုတာတွေက လူစီးလူကပ်တွေ လစာတစ်ဝက်လျှော့ချတာတော့ပြောမနေနဲ့
လျှပ်စစ်တောင်မှ သများဒဂါတွေ ၂၂၀ သုံးနေတာကို သူဒို့ဂ ၁၁၀ ဆိုပြီး တစ်ဝက်လျှော့ထားသေးတာပဲ။
သြဇီမှာလည်း လုပ်ရတဲ့ ရာထူး နှင့် အလုပ် တူရင် ၊
Permanent သမား ( အမြဲတန်း ဝန်ထမ်း ) က ၊
Part-Time သမား ( အချိန်ပိုင်း ဝန်ထမ်း ) ထက် ၊
လစာ နည်းတယ် ။
ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ Permanent သမား ( အမြဲတန်း ဝန်ထမ်း ) အတွက် ၊
ကျန်းမာရေးအာမခံ၊ အသက်အာမခံ ၊ ပင်စင် ( CPF ) ကို ၊
ကုမ္ပဏီက တာဝန်ယူရလို့ပါ ။
မြန်မာ ပြည် မှာ လာလုပ်တဲ့ ဘယ် company ကများ ပင်စင် ပေးတာ ကြားမိသလဲ .. အဘ ရယ် . . နောက် ပိုင်းတော့ မပြောတတ် အခုထိတော့ အဲ့လို မကြားမိပါကြောင်း လေး . . . . . . . အဲ့လို ပင်စင် ပေးလို့ ကတော့ တစ်သက် နဲ့ တကိုယ် မလုပ်ခဲ့ တဲ့ လခစား ၀န်ထမ်း ၀င်လုပ်ချင် စိတ် ပေါ် မိမယ် ထင်တာပါပဲ . .
ပြည်ပ အခြေစိုက် Company အများစု က အရင်ထဲက လုပ်သား ဈေးချိုတယ် ဆိုတာ နဲ့ ၀င်လာကြတာ ကိုး . . ပြီးတော့ ၀န်ထမ်း ကို ရသလောက် ညှစ်တယ် ..။ မျက်နှာလို အားရ Supervisior တွေ နဲ့ National Manager တွေဆိုတာကလဲ . … ရှိသေး . . . . . . . ဘယ် ဖက် မှ ကြည့်မနေ နဲ့ ပိုစ့်ပိုင်ရှင် ရေ . . . . ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာ ကို တည့်သာ တောင်း မရ ရင် မလုပ် နဲ့ . . . သမီးပေး မှ သမက် ရတယ် မှတ်ပါ . . . .။
သူတို့ လိုချင်လို့ နေစေချင်လို့ နောက်လထပ်နေပေးရမှာဆိုတော့ လစာညှိုလို့ ရကောင်းပါရဲ့ ။ မရရင်တော့ အတော် လွန်လွန်းတာလို့ ပြောရမှာပါ။
အဲ့ဒီခါဆိုရင်တော့ အားမနာပါနဲ့တော့ ။ လုပ်စရာရှိတာသာ လုပ်ချလိုက်ပါ။
မနေ့က မြှောက်ပေးထားပြီးပီမို့ ဒီနေ့တော့ နည်းနည်း ပြန်ဖြေလိုက်မယ်
ကုမ္မဏီဖက်က ညစ်နိုင်တာ recommendation letter အလုပ်ထွက်တဲ့အခါ ကိုယ်လုပ်ခဲ့တာကို အကောင်းမရေးဘဲ လုပ်နိုင်တယ်။ အထူးသဖြင့် နောက်အလုပ်မှာ အဲဒီ အကဲဖြတ်ချက် လိုအပ်တယ်ဆို ကိုယ့်အတွက် အနှောက်အယှက် ဖြစ်နိုင်တယ်။ ယုံကြည်ရတဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ ကျန်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ခံသာသေးတယ်။ အဲဒီ စာရရင်တောင် တဖက်က ဖုန်းဆက်မေးတဲ့အခါ မကောင်းပြော လုပ်ကြံတာ ခံရနိုင်သေးတယ်။ အလုပ်ရှင်ဖက်က ညစ်နိုင်တာကို ပြောတာပါ။ နောက်တခုက နာမည်ကို ဖွင့်ချလိုက်ရင် အခြားအလုပ်ရှင်တွေအတွက် ညိုညင်စရာ သတိပြုစရာ ဖြစ်သွားနိုင်လို့ အလုပ်ရှာတဲ့နေရာ အခက်အခဲ တွေ့နိုင်တယ်။ ဖြစ်နိုင်တာတွေကို ပြောတာပါ။ အကောင်းဆုံးက အေဗေးဂျပန်ကောင်ကို ငါဖေဖော်ဝါရီလအကုန်ထိပဲ လုပ်နိုင်မည့်အကြောင်း ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ရှင်းပြပါ။ ဆက်ဆံရေး မပျက်တာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ အကယ်၍ ကိုယ့်မှာ နောင်လှမ်းဖို့ နေရာ ခိုင်ခိုင်မာမာ ရှိပြီးသားဆိုရင်တော့ မာလို့ရတာပေါ့လေ…။ တဖက်ကလည်း သူစဉ်းစားနေတာကို မစောင့်ဘဲ ကိုယ်ရှာစရာရှိတာ ချိတ်စရာရှိတာကို ရဲရဲချိတ်ထားပါ။
ပြောရရင်တော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာတောင် မြန်မာအချင်းချင်းခေါင်းပုံဖြတ်နေကျတာ။ အဓိကကတော့ မြန်မာပြည်မှာလည်း အလုပ်သမားဥပဒေကို ခိုင်ခန့် စေချင်တယ်။
ကိုယ်ပြောချင်တာတွေ၊ ကိုယ့်အခက်အခဲတွေကို ညနေရုံးဆင်းချိန် အေးအေးဆေးဆေး စာစီရေးပြီး အီးမေးပို့ပါလား…
စာနဲ့ဆိုတော့ ကိုယ်လဲ အေးအေးဆေးဆေး ပြည့်ပြည့်စုံစုံရှင်းပြလို့ရတယ်… သူလဲ စင်းစား ဖတ်ချိန်ရတာပေါ့…
နောက်ထပ်အလုပ်၇ှာတာလဲ တစ်ပိုင်းပေါ့… တစ်ခါတစ်လေ misunderstanding တွေလဲ ၇ှိတတ်ပါတယ်…
ပြီးခဲ့တဲ့.. ၄နှစ်ကများ.. အမေရိကားရီဆက်ရှင်နဲ့..ပြုတ်လိုက်ကြတာသောက်သောက်လဲ..
ဒေါက်တာဘွဲ့ကြီးတွေနဲ့.. အလုပ်ပြုတ်လာလို့.. ပေးစရာအကြွေးတွေ..အတိုးတက်လာလို့.. ဒေ၀ါလီ(bankrupt) မခံရအောင်.. စားပွဲထိုးဝင်လုပ်သူတွေတောင်ရှိရဲ့..။
သိမ်းထားစုထားသမျှ.. 401kတွေ.. အာမခံတွေ.. ပင်စင်တွေလည့်း. ပလုံ..ပလုံပါပဲ..။
အိမ်နား.. ၅မိုင်အကွာလောက်က..တောင်ပေါ်မှာနေတဲ့.. သူဌေးရပ်ကွက်ထဲက.. မိသားစုတစုများ.. အိမ်ထောင်ဦးစီးကတအိမ်လုံးသတ်..သူပါသတ်သေတာတွေလည်းဖြစ်ရဲ့..။ အဲလိုဟာတွေနိုင်ငံအနှံ့ ဖြစ်သပေါ့..။
Jobless man kills family, self – Los Angeles Times
Oct 7, 2008 – The 45-year-old Porter Ranch financial manager who once made more … two options: taking his own life, or killing himself and his entire family.
အစိုးရလည်း..ပြုတ်လုပြုတ်ခင်.. အကြွေးလယ်ပင်းနစ်နေပြီး.. ကုမ္ပဏီကြီးတွေပါပြုတ်. .ဒေ၀ါလီခံရတာကိုး..
အဲဒါတွေလည်းရှိကြောင်း.. သိစေချင်..။ :harr:
နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတေ များလာလေ လူလည်ကျချင်သူတေ ပိုတိုးလာလေ ဖြစ်မှာမို့
ကျမဆို ကိုလိုချင်တဲ့ ကိုနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ အလုပ်(လစာကိုမစဉ်းစားဘဲ) မရသရွေ့
စုဆောင်းထားတာလေးတွေ ရောင်းစားပြီး ငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာ
အလုပ်လဲလုပ်ရသေး စိတ်လဲဆင်းရဲရသေး တော့ဘယ်တော့မှအဖြစ်မခံတော့ဝူးလို့ကို ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားပြီးသား။
ငါလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ဆက်ကြိုးစားပါ လကဗျာရေ .. အရမ်းကြီးစိတ်ပူမနေပါနဲ့အုံး။
ကိုနဲ့သင့်တော်ကိုက်ညီတဲ့ အလုပ်တွေ တပုံတပင်ရှိသေးတယ်လို့ဘဲတွေးထားပါ။
အာမခံပေးရတာတွေ၊သူတို့ ရဲ့ အသွားအပြန်စရိတ်တွေရှိတာ၊ အစိုးရကို အခွန်ဆောင်ရတာတွေကို ကျွန်မသိပါတယ်။ နားလည်ပေးပါတယ်။ အစောကြီးကတည်းက ဒီလိုမျိုးသူတို့ ဘက်က ကုန်ကျစရိတ်ရှိတယ်ဆိုရင် သတ်သတ်မှတ်မှတ် ၀န်ထမ်းက ဘယ်အဆင့်လောက် တတ်မြောက်ရင် ဘယ်လောက်ပေးမယ် ဆိုတဲ့ စကေးလ်တစ်ခုထားပြီး ဒီဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ကို လိုချင်ဦးတော့ အဲဒီစကေးလ်ကျော်နေရင် မခန့် ပဲနေ ။ သိပ်ပြီး တော့လိုချင်နေရင် ရအောင်ညှိ သဘောတူရင် ခန့်။ နှစ်ဦးသဘောတူရင် အလုပ်လုပ်။ အခု သူတို့ ခန့်ထားတဲ့ ၀န်ထမ်းတိုင်းက အားလုံးသူတို့ လိုချင်လို့ ခေါ်ထားပြီး နှစ်ဦးသဘောတူညီလို့ လုပ်နေကြတဲ့သူတွေချည်းပါပဲ။ လုပ်သက်ကြာလေလေ ပိုပြီး ကျွမ်းကျင်လာတယ်ဆိုရင်တောင် လစာတိုးတာ ဘောနပ်စ်ပေးတာတို့ လုပ်ပေးရမှာ။ခန့် ပြီး ၄လကြာမှ ရုတ်တရတ် စကေးလ်ကျော်နေလို့ ဆိုပြီး ဈေးချပစ်တာ ကျွန်မတို့ က အိတ်စ်ပါရာဖြစ်နေတဲ့ ရောင်းကုန်မဟုတ်ဘူးလေ။
ခံစားချက်တွေ မျှဝေပေးချင်တာတွေ အများကြီး။
အရှည်ကြီးမမန့်နိုင်တော့တာမို့ အတိုဘဲ ပြန်ဝင်လိုက်တော့မယ်။
အလုပ်နဲ့ပါတ်သက်လို့ ဘက်စုံက အတတ်နိုင်ဆုံး Perfect ဖြစ်အောင်သာ လုပ်ထားရင် ဘယ်မှာဘဲ လုပ်လုပ် တိုးတက်မှာပါ လို့ ထင်တာပါဘဲ သမီးရေ။
တစ်လက်စထဲ ရွာထဲ မှာ အချိန်အတော်ကြာပျောက်နေမဲ့ အကြောင်းကိုလဲ အားလုံးကို အသိပေးလိုက် ပါတယ်။
အန်တီလည်း ဒီပို့စ်ကို ၀င်လိုက်ထွက်လိုက် ဘာအကြံပေးရမှန်းမသိဖြစ်နေတယ်။
ခုထိခေါင်းထဲပေါ်တာတော့ စိတ်လိုက်မာန်ပါ မလုပ်စေချင်ပါဘူး။
အခြား ကိုယ့်ရဲ့ ရပိုင်ခွင့်တွေ(ပညာ သင်ယူလို့ ရနိုင်တာလို မျိုး)ကိုပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။
နောက်ပြီး ကိုယ့်မှာကော အခြားတစ်နေရာ ခြေကုပ်ရရဲ့လား။
ခိုင်မာတဲ့ အခြားတစ်နေရာရဲ့ offer ရရင်လည်း ဒီလို အဆင့်အတန်းမျိုး ပေးနိုင်မလားလို့ မူလ အလုပ်မှာ ညှိနှိုင်းပါအုံးလို့ပြောချင်ပါတယ်။